Ny efijery malefaka an'i Xiaomi dia azo jerena amin'ny horonantsary ary tsy hamela anao tsy hiraharaha | Vaovao momba ny gadget
Ny efijery malefaka an'i Xiaomi dia azo jerena amin'ny horonantsary ary tsy hamela anao tsy hiraharaha
Ny andro tsy hifohazantsika amin'ny vaovao izay Xiaomi misy ifandraisany amin'izany, tsy isalasalana fa ho andro somary hafahafa ity. Ary ilay mpanamboatra dia iray amin'ireo orinasa mavitrika indrindra amin'izao fotoana izao ary isan'andro dia manana fahagagana voaomana ho antsika izy, amin'ny ankabeazan'ny tranga hahasambatra anay ary saika ny olon-drehetra.
Androany dia mila mahita ny efijery malefaka efa niasa nandritra ny fotoana elaela i Xiaomi. Soa ihany koa izahay mahita azy miasa amin'ny horonantsary izay ho hitanao mitondra ity lohateny ity.
Amin'ity horonantsary ity dia hitantsika ny fomba misy olona mivezivezy amin'ny interface MIUI 8 miaraka amin'ny efijery aforitra mihetsika tsy mihetsika mandritra ny horonan-tsary. Ity karazana efijery ity dia tsy zava-baovao, satria ohatra i Lenovo dia efa naneho toetra mampiavaka azy tamin'ny IFA farany teo, saingy amin'ity indray mitoraka ity dia afaka mahita azy io miasa amin'ny fomba mahaliana kokoa isika.
Amin'izao fotoana izao ity efijery ity dia tsy misy fampiasana voamarin'i Xiaomi, saingy toa mazava kokoa fa ny tsena dia tsy isalasalana fa miroso mankany amin'ny famoahana ny terminal izay afaka aforitra, aforitra ary apetraka amin'ny toerana tsy azo eritreretina ny efijery.
Toa tsy mampino ny vaovao anio avy amin'i Xiaomi, saingy aza atao ambanin-javatra ny mpanamboatra sinoa ary azo inoana fa rahampitso hifoha vaovao tsy mampino na mahaliana kokoa isika rahampitso.
Mihevitra ve ianao fa ireto efijery malefaka ireto dia mety hampiasa mahaliana ho an'ny mpampiasa rehetra?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ny efijery malefaka an'i Xiaomi dia azo jerena amin'ny horonantsary ary tsy hamela anao tsy hiraharaha
Instagram dia efa manana rindranasa birao
90% ny mpampiasa Galaxy Note 7 dia misafidy ny sisin'ny Galaxy S7